को मान्छे कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस् आनीबानी र स्वाभाव ब्लड ग्रुपबाटै – osnepal tv
को मान्छे कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस् आनीबानी र स्वाभाव ब्लड ग्रुपबाटै
काठमाडौं । मानिसको स्वभाव र आनीबानी उसको ब्लड ग्रुपबाट पत्ता लाग्ने दाबी गरिएको छ । एक अनुसन्धानकाअनुसार मानिसहरुको रगत समुह अनुसार उसको आनीबानी र स्वभाव थाहा पाउन सकिन्छ। संसारका सबैभन्दा बढी मानिसमा रगत समूह ‘ओ’ पाइन्छ । ओ र ओ प्लस गरी करिब ४७ प्रतिशत मानिसमा यो रगत समुह रहेको हुन्छ जसमा ४० प्रतिशत जति ओ प्लस र ७ प्रतिशत जतीमा ओ रहेको हुन्छ । यो रगत समुहका मानिसहरु नेतृत्व गर्न चाहना राख्ने तथा क्षमता भएका, आफुले शुरु गरेको काम फत्ते गरी छाड्ने, सत्यतामा विश्वाश गर्ने, मायालु र आत्म(विश्वाशले भरिएका हुन्छन भने यो रगत समुह भएका मानिसहरुको कमजोरी भनेको डाहा गर्ने बानी र धेरै प्रतिष्पर्धात्मक हुन खोज्ने भएको अनुशन्धानको क्रममा पाईएको थियो ।
रगत समूह ‘ए’ – यो रगत समुह करीब ४० प्रतिशत मानिसहरुमा हुन्छ जसमा ३४ प्रतिशतमा ए प्लस ६ प्रतिशतमा ए पाईन्छ । यो रगत समुह भएका मानिसहरु शान्त र सामाजिक खालका, अरु सँग काम गर्न मनपराउने, कमजोरीको रुपमा झुक्न नचाहाने र आराम गर्न नसक्ने वा नचाहाने बानी भएका हुन्छन ।
रगत समूह ‘बी’– यो समुहको रगत कम मानिसहरुमा मात्र पाईन्छ जसमा करीब ८ प्रतिशतमा बी प्लस र १ प्रतिशतमा मात्र बी हुन्छ । यो रगत समुह भएका मानिसहरु एकलकाँटे, जे पनी एक्लै गर्न चाहाने रचनात्मक खुबी भएका झुक्न सक्ने खुबी भएका हुन्छन जसले गर्दा कहिले काही काम बिग्रन समेत सक्छ।
रगत समूह ‘एबी’– यो मानिसमा पाईने सबैभन्दा कम पाईने रक्त समुह हो । यो ४ प्रतिशतमा मात्र पाईन्छ जसमा ३ प्रतिशत एबी प्लस र १ प्रतिशतमा एबी पाईन्छ। यो रगत समुह भएका मानिसहरु नरम र ठट्टा रमाईलो गर्ने खालका हुन्छन तर निर्णय गर्ने क्षमताको कमी हुन्छ ।
Previous article नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Next article फिल्म ‘अंग्रेजी मीडियम’ मा अभिनेत्री करिना कपुरको पहिलो लुक सार्बजनिक, तस्बिर बन्यो भाइरल